बेलायती राजकुमार ह्यारीको योजना : २ सन्तान मात्रै ! | NepalDut
बेलायती राजकुमार ह्यारीको योजना : २ सन्तान मात्रै !
नेपालीमाझ लोकप्रिय मानिन्छन्, बेलायती राजकुमार ह्यारी । विशेष गरी गोर्खा फौजसँगै अफगानिस्तान युद्धमा सामेल भएको र गोर्खा भुकम्पपछि, पुननिर्माणमा खटिएपछि, नेपालमा उनको लोकप्रियता बढेको हो । पछिल्लो समय उनले धर्तीमा जन्मिने सन्तानको औचित्य र आफुहरुको योनजाबारे बोलेका छन् ।
राजकुमार ह्यारी र राजकुमारी मेगनले पहिलो सन्तान जन्माएको केही महिनापछि, उनीहरुले फेरि अर्को सन्तानको रहर गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । तर आम मान्छेले अनुमान गरेभन्दा यो विषय अलिक फरक छ ।
यही साता सार्वजनिक भएको एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा राजकुमार ह्यारीले, आफु र श्रीमतीले दुई भन्दा बढी सन्तान नजन्माउने योजना बनाएको खुलासा गरे । पृथ्वीका खातिर आफुहरुले यो निर्णय लिएको पनि उनले खुलाए ।
बढीमा दुई । बेलायती चर्चित प्राणीशास्त्री (प्रिमाटोलोजिष्ट) जेन गुडअलसँगको कुराकानीका क्रममा ह्यारीले भने, ‘बढीमा दुई’ ।
‘हामी यो ग्रहका एक प्रजाति हौं र मलाई लाग्छ यो ठाउँ हाम्रै लागि, केबल हाम्रा लागि मात्र हो जस्तो लाग्छ’, पृथ्वीमा मान्छेको प्रभाव दर्शाउँदै उनले भने । ‘हामी जत्ति बौद्धिक छौं र बौद्धिक छौं भन्ने छ, हामीले अर्को पुस्ताका लागि केही राम्रो चिज छाडेर जानुपर्छ’, उनले भने ।
सन् २०१८ को गृष्ममा ह्यारीको बिहे भएपछि नै ब्रिटिश राजतन्त्रमा केही परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । त्यसयता, ह्यारी दम्पत्तिले शाही मूल्य र परम्पराको केही मान्यता तोडेको छ ।
जस्तो, छोरा आर्ची जन्मँदा पनि उनीहरुले फोटो खिचाउन दिएनन् । बेलायती राजपरिवारका अरु सदस्यले सन्तान जन्माउँदा भने अस्पताल बाहिर फोटो खिचाउने चलन छ । साथै आर्चीको इशाइ बनाउने समारोहमा पनि यो जोडीले फोटो पत्रकारहरुलाई ढिम्किन दिएन ।
डा गुडअलसँगको कुराकानीमा उनले अभिभावकको व्यवहार बालबच्चामा सर्ने भन्दै जातीयताको कुरा पनि झिके । विश्वप्रतिको जीवनप्रतिको र मान्छेप्रतिको दृष्टिकोण, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा कलंकको रुपमा सारिँदै आएको उनको भनाइ थियो । उनको यो भनाई, अस्वेत आमाबाट जन्मिएकी मेगनप्रति आउने गरेको नश्लीय टिकाटिप्पणीप्रति लक्षित थियो ।
बेलायती राजपरिवारमा सन्तान थोपर्ने क्रममा समेत उनले भंग गर्ने सोचाइ राखेका हुन् । महारानी भिक्टोरियाराका ९ सन्तान थिए । महारानी एलिजावेथकै ४ सन्तान छन् । एलिजाबेदका ४ सन्तानमध्ये हरेकका दुई दुई सन्तान छन् । दाजु राजकुमार विलियम र केटका तीन सन्तान भइसकेका छन् ।
सन्तान जन्माउने आफ्नो योनजा र नश्लीय व्यवहार सम्बन्धी विषयमा राजकुमार ह्यारिले दिएको यो अभिव्यक्तिले बेलायती पत्रपत्रिकामा ठूलो ठाउँ पाएका पनि छन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)